Ding Dong ၏ ၀ င်ငွေသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် ၇၂% တိုးတက် ခဲ့သည် – Pandaily
Feb 16, 2022, 13:08ညနေ 2022/02/16 14:01:34 Pandaily
တရုတ် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး နှင့် လတ်ဆတ်သော ကုန်စုံဆိုင် များ ဖြန့်ဖြူး ရေး ကုမ္ပဏီ Ding Dong Buy အင်္ဂါနေ့ဒီဇင်ဘာလ 31, 2021 အဆုံးသတ် စတုတ္ထ သုံးလပတ် ရလဒ်များကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်. ထုတ္ျပန္တဲ့ ကိန္းဂဏန္း ေတြအရ စတုတၳ သုံးလ ပတ္ ၀င္ေငြ ဟာ တစ္ႏွစ္ ထက္ တစ္ႏွစ္ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄၈ ဘီလ်ံ အထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တွင်စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀. ၁၂ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၇၇. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။
စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် Ding Dong သည် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ ဝယ်ယူ ရာတွင် ယွမ် ၁. ၀ ၉၆ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ၇၃ သန်း) အရှုံးပေါ် ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် ယွမ် ၁. ၂ ၄၆ ဘီလီယံ ရှိခဲ့သည်။ US မဟုတ်သော အထွေထွေ စာရင်းကိုင် စံနှုန်း များအရ အသားတင် အရှုံး သည် ၂၀၂၀ တွင် ယွမ် ၁. ၂ ၃၉ ဘီလီယံ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ယွမ် ၁. ၀ ၃၄ ဘီလီယံ ခန့်ရှိသည်။ တိုးတက်မှု နှစ်ခု စလုံးက ဆုံးရှုံး မှုများ ကျဆင်း နေ ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် ဒီဇင်ဘာလတွင် ရှန်ဟိုင်း တွင် အမြတ်အစွန်း ရရှိ ကြောင်း ကြေငြာ ခဲ့ပြီး စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် Yangtze မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသရှိ UEM (ယူနစ် စီးပွားရေး ပုံစံ) ကိုစောင့်ကြည့် ခဲ့သည်။
Q4 ၏စွမ်းဆောင်ရည် ကို တုံ့ပြန် သည့်အနေဖြင့် Ding Dong Buying ၏ တည်ထောင်သူ နှင့် စီအီးအို Liang Changlin က ကုမ္ပဏီ၏ Q4 စွမ်းဆောင်ရည် သည် စတင်တည်ထောင် ချိန် မှစ၍ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကအားဖြင့် စားသုံးမှု အဆင့်မြှင့်တင် မှုနှင့် ကုန်ပစ္စည်း စွမ်းအား များကြောင့် မောင်းနှင် လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ် တွင်စုစုပေါင်း အမြတ်အစွန်း သည် ၂၇. ၇% ရှိပြီး တတိယ သုံးလပတ် ထက် ၉. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း အမြတ်အစွန်း တိုး ခြင်းသည် ရောင်းအား စွမ်းရည် တိုးလာ ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ Ding Dong Minchai ကသူ၏ ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာတွင် ၎င်း၏ ကြီးမားသော အားသာချက်များနှင့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြုပြင် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်သည် ထုတ်လုပ်မှု အဆုံးတွင် အမြတ်အစွန်း ကို အထောက်အကူပြု ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ဖွဲ့စည်းပုံ ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ကောင်းမွန် အောင်ပြုလုပ် ထားပြီး အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များ၏ GMV ဝေစု သည်တဖြည်းဖြည်း တိုးပွား လာခဲ့သည်။
ကုန်ပစ္စည်း အချက်အလက်များအရ ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာ များအရ Ding Dong Maicai တွင် OBMs ၂၀ ကျော်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ် ရေး၊ ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် စနစ် များ၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နယ်ပယ်များတွင် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များကိုပိုမို တိုးမြှင့် သွားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် Q4 တွင် Ding Dong Maicai တွင် စားနပ်ရိက္ခာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပြုပြင် ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ ၁၀ ခု၊ အမျိုးအစား ခွဲ စင်တာ ၆၀ ခန့်၊ ရှေ့ ဂိုဒေါင် ၁၄၀၀ ခန့်နှင့် စတုရန်းမီတာ ၅၀၀, ၀၀၀ ရှိသည်။ ထို့အပြင် ယခုနှစ် တွင်ပိုမို ထိရောက်သော ကုန်စည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးကို ဆောင်ကြဉ်း ရန် အကြီးစား နှင့် ခေတ်မီ လတ်ဆတ်သော အဆောက်အအုံ သုံးခု ကိုတည်ဆောက် ရန်စီစဉ်ထားသည်။
Ding Dong Buying ၏ မဟာဗျူဟာ အရာရှိ ချုပ် Yu Le က ကွန်ဖရင့် တစ်ခုတွင် ပြောကြား ရာတွင် 3R ဟင်းလျာ များအတွက် အကြီးမားဆုံး အတားအဆီး မှာ အရောင်း လမ်းကြောင်း ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် Ding Dong Buying ၏အဓိက ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ Q4 တွင် GMV သည် ယွမ်သန်း ၉၀၀ ကျော် ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Ding Dong Buying သည်နှစ် စဉ် စားသုံးမှု အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်-3R ရောင်းအား သည် ၃၀၀% တိုးတက် ခဲ့သည်
Liang Changlin သည် ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်၍ ကွန်ဖရင့် ခေါ်ဆို မှုတွင် ကောလာဟလ များကိုဖော်ထုတ် ခဲ့သည်ဝန်ထမ်း ၁၀, ၀၀၀ အလုပ်ဖြုတ် ခံရသူက ဆက်ပြော သည်မှာ ရှန်ဟိုင်း အလုပ်သမား စစ်ဆေးရေး ဌာနသည် ကွင်းဆင်း လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်း လည်ပတ် မှုသည် ယခင်နှစ် များနှင့် နှိုင်းစာ လျှင် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲမှု မရှိကြောင်း သူက ထပ် ပြောသည်။